दुई महिना पर्खदा पनि मिलेन हमालको समयFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
दुई महिना पर्खदा पनि मिलेन हमालको समय
यो पनि पढ्नुहोस् : विचाराधिन मुद्धामाथि सांसददेखी फिल्मकर्मीको आपत्ति किन ?
फिल्मी फण्डा । जेठ ३ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म हो ‘वीर बिक्रम २’ । फिल्मलाई लिएर मिम नेपाल नामक यूट्यूब च्यानलले समीक्षा भनेर एक भिडियो अपलोड गरेको थियो । समिक्षा, समिक्षा मात्र थिएन । फिल्मका टिमलाई भएसम्मका सबै मूख छोडेर गालि पनि गरेको थियो । जसको समीक्षाले आफ्नो १ करोड नोक्सान भएको भन्दै फिल्मका निर्देशक मिलन चाम्सले सञ्चालक प्रनेश गौतम र समीक्षा प्रकाशित भएको युट्युब च्यानल मिम नेपालविरुद्ध प्रशासनमा उजुरी गरेका थिए । सोही उजुरीका आधारमा केही दिन अघि प्रहरीले प्रनेश गौतमलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले चाम्सकै निवेदनको आधारमा प्रनेशमाथि साइबर अपराधको मुद्दा लगाई हिरासतमा राख्दै आएको छ । अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेपछि अदालतले पनि थप केही दिन हिरासतमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।
तर, यतिखेर उक्त कार्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । वितरक प्रचण्डमानले प्रनेशको पक्षमा रहँदै स्टाटस हालेका छन् । यता पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सोही विषयलाई लिएर ट्विट गरेका छन् । उनले लेखेका छन्,– ‘एब्सर्डिस्ट ह्युमरलाई विश्वभर सामान्य रुपमा लिइन्छ । त्यस्तै शैलीमा सिनेमाको हँस्यौली समीक्षा गरेकोमा प्रनेश गौतमलाई नेपाल प्रहरीद्धारा साइबर अपराधमा पक्राउ गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफ छ । आलोचनात्मक चेत लोकतन्त्रको मर्म हो, यसको संरक्षण गरियोस् ।’
तर, तीनै गगनले बिर्सिए । एक पटक आफ्नो कफि खाईरहेको फोटोलाई इडिट गरेर रक्सी खाईरहेको बनाउँदा साईबर क्राईममा मुद्धा हाल्छु भनेका थिए । विरोध गर्नको लागि कुनै कुरा नपाएर समाजिक सञ्जालमा आउनु सांसद गगन थापाको राजनीतिक शक्ती कमजोर हुँदै गएको र अब उनी शिथील बन्न लागेको आंशका हुन्छ ।
त्यस्तै सोही विषयलाई लिएर वरिष्ठ पत्रकार कनकमणी दिक्षितले ट्विटर मार्फत प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । उनले लेखेका छन् ,– ‘के, यत्ति मज्जाको ठट्यौली फिल्म रिभ्यू गरेको भरमा मिम नेपालका प्रनेश गौतमलाई प्रहरीले साइबर अपराधको मुद्दा चलाउन लागेको हो ? त्यसो हो भने यो गलत मात्र होईन अनर्थको पराकाष्ट हो र हाम्रो सामाजिक यात्राको दिशाको संकेत पनि ।’ कनकले पहिले प्रष्ट कुरा के हो बुझेको जस्तो लाग्दैन । शंकाको भरमा लेखेका छन् उनले स्टाटस । ठट्यौली समिक्षा त गर्न पाईन्छ । तर, व्यत्तिगत आक्षेप लगाएर मूखै छोडेर गालि गर्ने, अर्काको मानहानी गर्ने जस्ता काम समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न पाईँदैन भनेर पनि कनकहरुले बुझ्नुपर्ने हो ।
निर्माता तथा कलाकार दीपक राज गिरीले संयम अपनाउन सुझाएका छन् । उनले फेुबुकमा लेखेका छन्,–‘गल्ति गर्नेले कानुनी सजाय भोग्नु पर्छ , तर कहिलेकाहि मानबिय दृष्टिकोण बाट पनि हेरिनु पर्छ जस्तो लाग्छ । मिम नेपालको र मिलन चाम्सजीको यो केशबाट मैले छक्का पन्जा पाइरेसी केशलाइ सम्झि रहेको छू …, त्यति बेला हामीले संयमता अपनाउदा अपनाउदै त त्यस्तो दूर्घटना हुन पुग्यो .. जसले अहिले सम्म हामीलाई पीडाबोध भैरहन्छ । यो केशमा पनि अलि संयमता जरुरी छ जस्तो लाग्यो मलाई । क्षमा दान पनि ठूलो दान हो…दूबै पक्षले बसेर गल्ति गर्नेले आत्म आलोचना गर्ने र सम्बन्धित पक्षले हाम्रै घरको बिषय हो भनेर माफि दिन तिर लाग्नु नै उत्तम हुन्छ जस्तो लाग्छ…. जय नेपाली सिनेमा..!!!’
उनको कुरा केही हदसम्म राम्रो हो । उनले अपराधीलाई सजाय हुनुपर्ने घुमाउरो विचार राखेका छन् । साथै कहिँ कतै मानवीय संवेदनाले काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उता, फिल्मका निर्देशक मिलन चाम्सले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,– ‘देशका ठुला भनाउदा आदरणीय व्यक्तित्वलाई विनम्र अनुरोध, तपाईंहरुलाई लागेको, मज्जाको ठट्यौली फिल्म रिभ्यु भिडीयो के पुरै हेर्नू भाको छ ? आफ्नो परिवार, दिदी बहिनी, छोरी, आमा बुवासङ्गै बसेर हेर्न सक्नु हुन्छ ? रिभ्युको नाममा, गाली गलौज, पटक पटक अपशब्द, मानहानी, पेशागत मानहानी, चरित्र हत्या, रङ भेद, प्रत्येक नागरिकको ब्यापार ब्यवसाय गर्ने कानुनी तथा संबैधानिक हक माथी आघात पुर्याउनेलाई समर्थन गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने आदरणीय महानुभाबलाई मेरो भन्नू केही छैन । कानुनी राज्यमा, म न्यायको खोजीमा छु ।’
निर्देशकको यो विचारमा उनले अन्तिममा भनेका छन् । काननुी राज्यमा म न्यायको खोजीमा छु । यो जटिल कुरा हो । अदालतले विचराधिन राखेको मुद्धा माथी क्रिया र प्रतिक्रिया गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यसले अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउन सक्छ । बेलैमा सचेत हौं । यसैलाई आधार मानेर कनकमनि, गगन थापा, वितरक प्रचण्डमान श्रेष्ठ लगायतलाई कानुनी कार्वाही पनि गर्न सकिन्छ ।